I-China i-wholesale i-WPC ye-handrail engamanzi engamanzi i-WPC yangaphandle yeebalustrade abavelisi kunye nabathengisi | ULihua
Eqhelekileyo Khazi kwamadonga
China Ihowuliseyili WPC handrail zokubambelela WPC manzi balustrades zangaphandle
ukukhusela ukhuseleko lwabantu. Sinezindlela ezininzi zokubamba i-WPC ukwanelisa iimfuno zabathengi ezahlukeneyo. Kunye nokuthungwa kweenkozo zemithi kunye nokuchukumisa, oku kunokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Zokubambelela WPC babe uyilo entle ezintle kunye nokugcinwa lula izinambuzane ukumelana kunye ngqongqo eliphezulu. Ubume bendawo esingqongileyo, obunokuphinda busebenze ngokutsha kwaye akukho enye ikhemikhali eyingozi, okonga izixhobo zehlathi Kulula ukufaka kunye neendleko zabasebenzi eziphantsi. Akukho peyinti, akukho glu, ulondolozo olusezantsi.
● Sinemveliso yethu, umbala kunye nobukhulu bunokwenziwa ngokhetho lwakho. Nceda uzive ukhululekile ukubuza kuthi.
Egqithileyo Yangaphandle Co-extruded Wood edityanisiweyo WPC khazi
Okulandelayo: Amanzi aManzi aManzi eWPC eBhotile yePaki yePaki
Ukufakwa kwidayagramu yeLishen yeplastiki yokukhutshelwa kweenkuni
I-Q1: Ngaba iimveliso zakho ze-WPC zinokuba ne logo yomthengi?
A: Ewe, ukuba abathengi basinika ilogo yabo, sinokubeka ilogo kwiiphakheji zeemveliso okanye siyiprinte kwiimveliso ezizodwa!
Q2: Kude kube nini usenza ukungunda entsha iimveliso ezintsha?
A: Ngokubanzi, sidinga iintsuku ezili-15 ukuya ku-21 ukwenza ukungunda okutsha, ukuba kukho umahluko, iintsuku ezingama-5-7 kufuneka zitshintshe.
3.Q3: Ngaba umthengi kufuneka ahlawule umrhumo wesikhunta esitsha? Yimalini? Ngaba siza kubuya le ntlawulo? Kuza kuba nini?
A: Ukuba umthengi ufuna ukwenza ukungunda okutsha, ewe kufuneka ahlawule umrhumo wokubumba kuqala, iya kuba ngama-2300- $ 2800. Kwaye siya kuyibuyisa le mali xa umthengi ebeka iiodolo ezintathu zesikhongozeli esingu-20GP.
Q4: Leliphi icandelo leemveliso zakho ze-WPC?
A: Icandelo lethu leemveliso ze-WPC ngama-30% i-HDPE + 60% yeeFibers zeWood + 10% zeZongezo zeKhemikhali.
5.Q5: Uhlaziya njani iimveliso zakho?
A: Siza kuhlaziya iimveliso zethu inyanga nenyanga.
Q6: Uthini umgaqo woyilo wembonakalo yemveliso yakho? Zithini iinzuzo?
A: Iimveliso zethu ziyilo malunga nokusebenziseka kobomi, njenge-anti-slip, ukumelana nemozulu, ukunganyangeki, njl.
I-Q7: Umsebenzi wakho wokubumba uhlala ixesha elingakanani? Ungayigcina njani imihla ngemihla? Yintoni amandla eseti nganye yokufa?
Q8: Yintoni inkqubo yakho yemveliso?
2.Artisan lungiselela ifomula kwaye wenze isampuli yokuqinisekisa umbala nasemva konyango kunye nomthengi
3.Then yenza i-granulation (Lungisa umbandela), emva koko izakuqala ukuvelisa, iimveliso ze-extrusion ziya kufakwa kwindawo ethile, kamva siya kuyenza emva konyango, emva koko sipake ezi zinto.
Q9: Lide kangakanani ixesha lokuhambisa eliqhelekileyo kwiimveliso zakho?
A: Iya kwahluka ngokobungakanani.Kubanzi malunga neentsuku ezingama-7-15 kwisitya esinye se-20ft.Ukuba iimveliso ze-3D ezifakwe kwi-embossed kunye ne-extrusion, sifuna iintsuku ezi-2-4 ngokubanzi njengenkqubo eyinkimbinkimbi.
I-Q10: Ngaba unayo ubuncinci be-odolo yobungakanani? Ukuba kunjalo, buthi ubuncinci bobungakanani beodolo?
Q11: Uthini umthamo wakho uwonke?
Q12: inkulu kangakanani inkampani yakho? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
A: U-Lihua yiShishini eliPhakamileyo kunye neTsha leTekhnoloji, eligubungele isityalo se-15000 seemitha kwiLangxi Indusrial Zone.Sinabasebenzi abangaphezulu kwama-80, abo banamava okusebenza kweWPC.
Imihombiso yeWPC yokubamba
Yangaphandle Co-extruded Wood edityanisiweyo WPC khazi
China umenzi manzi 130x10mm iinkuni pla ...
Eco Friendly WPC Swimming Pool Around Iindawo ...
China umenzi 3D kwithala leencwadi 157x16mm firepro ...
Eco-friendly Wood edityanisiweyo Co-extrusion WPC De ...
Ukuxhathisa kwemozulu yangaphandle Wood Composite WPC H ...
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking umgangatho, WPC nokwadala, WPC decking ngaphandle, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking edityanisiweyo,